ဘောလုံးသမားတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ပေါင်းစပ်ကြည့်ရအောင်လား
ဘောလုံးသမားတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်ရအောင် .
17 Oct 2018 . 3:12 PM
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီးတော့ နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးသွားမယ်ထင်တယ်။ ဆိုလိုရင်းက ဒီလိုပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းက Sky Sports နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မန်ယူ နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ် Gary Neville က မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ ဒီဘရိုင်းနား Kevin De Bruyne ဟာ ပေါလ်စခိုးလ် Paul Scholes နဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ် David Beckham တို့ နှစ်ဦးပေါင်းထားသလိုပဲဆိုပြီး ချီးကျူးခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီဘရိုင်းနားဆီမှာ ပေါလ်စခိုးလ်လို Passing Skill ၊ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်လို Crossing Skill ကောင်းတဲ့သူလို့ ပြောချင်တာပါ။ ပေါလ်စခိုးလ်+ဘက်ခမ်= ဒီဘရိုင်းနားပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ကစားသမားတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ရှိသလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် . .
Carles Puyol + Christian Vieri = Sergio Ramos
ရီးယဲလ်နောက်ခံလူ ရာမို့စ်ဟာ ပူယိုးလ်နဲ့ ဗီယာရီ နှစ်ဦးပေါင်းထားသလို စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာက Defensive Skill ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် လိုအပ်လာရင် အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ပြီး တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး ဗီယာရီလို ခေါင်းတိုက်စွမ်းရည် ကောင်းသူလို့ တင်စားချင်တာပါ။
Michael Laudrup + Andres Iniesta = Isco
ရီးယဲလ်ကွင်းလယ်လူ အစ္စကိုကတော့ မိုက်ကယ်လောဒရပ်နဲ့ အင်နီယေစတာ ပေါင်းစပ်ထားသလိုပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစ္စကိုဟာ ခံစစ်ရော၊ တိုက်စစ်ပါ Balance ဖြစ်အောင် ကစားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Steven Gerrard + Edgar Davids = Arturo Vidal
ဒီတစ်ခုကတော့ အသေးစိတ်ပြောစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ဗီဒယ်လ်ဟာ တကယ်ပဲ ဂျရတ်လို Attacking ကောင်းတဲ့အပြင် အက်ဂ္ဂါဒေးဗစ် လိုမျိုး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
Dimitar Berbatov + Juan Roman Riquelme = Mesut Ozil
ဘာဘာတော့ဗ်က Speed ထက် Skill ပိုကောင်းတဲ့သူ၊ ရီကွယ်လ်မေးဆိုတာကလည်း တစ်ချိန်တုန်းက ကွင်းလယ်ဗိသုကာလို့ တင်စားခံခဲ့ရသူ။ အိုဇေးလ်ဟာ အဲဒီကစားသမားနှစ်ဦး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
Thierry Henry + Ronaldo = Kylian Mbappe
ဒီပေါင်းစပ်မှုကတော့ တကယ်အမှန်ပါပဲ။ ဘာပေရဲ့ ကစားပုံကို ကြည့်ရင် ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ရော်နယ်လ်ဒိုလို Speed ၊ Dribbling Skill နဲ့ အွန်နရီလိုမျိုး ဘောလုံးစွမ်းရည် ပြည့်ဝတာကို ပရိသတ်တွေ အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဘောလုံးသမားတွေကို စိတ်ကူးသက်သက် ပေါင်းစပ်ထားတာဆိုပေမယ့် လက်တွေ့ဆန်တယ်လို့လည်း ပြောရမယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ဒီလိုပဲ ကစားသမားတွေကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူက ဘယ်သူနဲ့တူလဲဆိုတာ အပျော်သဘော စဉ်းစားကြည့်ပါလား . . .
ဘောလုံးသမားတှကေို စိတျကူးနဲ့ ပေါငျးစပျကွညျ့လိုကျရအောငျ .
ခေါငျးစဉျဖတျပွီးတော့ နညျးနညျး ရှုပျထှေးသှားမယျထငျတယျ။ ဆိုလိုရငျးက ဒီလိုပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျတုနျးက Sky Sports နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ မနျယူ နာမညျကြျောကစားသမားဟောငျး ဂယျရီနဗီးလျ Gary Neville က မနျစီးတီးကှငျးလယျလူ ဒီဘရိုငျးနား Kevin De Bruyne ဟာ ပေါလျစခိုးလျ Paul Scholes နဲ့ ဒေးဗဈဘကျခမျ David Beckham တို့ နှဈဦးပေါငျးထားသလိုပဲဆိုပွီး ခြီးကြူးခဲ့တယျ။ ဆိုလိုတာက ဒီဘရိုငျးနားဆီမှာ ပေါလျစခိုးလျလို Passing Skill ၊ ဒေးဗဈဘကျခမျလို Crossing Skill ကောငျးတဲ့သူလို့ ပွောခငျြတာပါ။ ပေါလျစခိုးလျ+ဘကျခမျ= ဒီဘရိုငျးနားပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ကစားသမားတှကေို ပေါငျးစပျပွီး ဘယျလိုစှမျးဆောငျရညျမြိုး ရှိသလဲဆိုတာကို တှကျခကျြကွညျ့ခငျြတာဖွဈပါတယျ . .
ရီးယဲလျနောကျခံလူ ရာမို့ဈဟာ ပူယိုးလျနဲ့ ဗီယာရီ နှဈဦးပေါငျးထားသလို စှမျးရညျရှိပါတယျ။ ပွောခငျြတာက Defensive Skill ကောငျးမှနျတဲ့အပွငျ လိုအပျလာရငျ အသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျပွီး တဈခြိနျက နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူး ဗီယာရီလို ခေါငျးတိုကျစှမျးရညျ ကောငျးသူလို့ တငျစားခငျြတာပါ။
ရီးယဲလျကှငျးလယျလူ အစ်စကိုကတော့ မိုကျကယျလောဒရပျနဲ့ အငျနီယစေတာ ပေါငျးစပျထားသလိုပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အစ်စကိုဟာ ခံစဈရော၊ တိုကျစဈပါ Balance ဖွဈအောငျ ကစားနိုငျလို့ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခုကတော့ အသေးစိတျပွောစရာ မလိုဘူးထငျပါတယျ။ ဗီဒယျလျဟာ တကယျပဲ ဂရြတျလို Attacking ကောငျးတဲ့အပွငျ အကျဂ်ဂါဒေးဗဈ လိုမြိုး ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ကစားတတျသူဖွဈပါတယျ။
ဘာဘာတော့ဗျက Speed ထကျ Skill ပိုကောငျးတဲ့သူ၊ ရီကှယျလျမေးဆိုတာကလညျး တဈခြိနျတုနျးက ကှငျးလယျဗိသုကာလို့ တငျစားခံခဲ့ရသူ။ အိုဇေးလျဟာ အဲဒီကစားသမားနှဈဦး ပေါငျးစပျထားတဲ့အတိုငျးပါပဲ။
ဒီပေါငျးစပျမှုကတော့ တကယျအမှနျပါပဲ။ ဘာပရေဲ့ ကစားပုံကို ကွညျ့ရငျ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ရျောနယျလျဒိုလို Speed ၊ Dribbling Skill နဲ့ အှနျနရီလိုမြိုး ဘောလုံးစှမျးရညျ ပွညျ့ဝတာကို ပရိသတျတှေ အသိပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ဘောလုံးသမားတှကေို စိတျကူးသကျသကျ ပေါငျးစပျထားတာဆိုပမေယျ့ လကျတှဆေ့နျတယျလို့လညျး ပွောရမယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဒီလိုပဲ ကစားသမားတှကေို ပေါငျးစပျကွညျ့ပွီး ဘယျသူက ဘယျသူနဲ့တူလဲဆိုတာ အပြျောသဘော စဉျးစားကွညျ့ပါလား . . .